Posted by Tranquillus | Agoosto 22, 2020 | Si aad u degto oo uga shaqeyso Faransiiska
Hubinta jeegaaga bil kasta, miyey runtii waxtar leedahay? Kani maahan mid faa iido leh laakiin ka badan inta loo baahan yahay. Waxaa jira liis aad u dheer oo clummily oo had iyo jeer la kulma bixinta. Khaladaadkeeda ayaa ah nasiib darro aad u badan inta aad qiyaasi karto. Saddex meelood meel shaqaalaha ayaa leh waxay ogaadeen khalad khaldan mushaharkooda 12-kii bilood ee la soo dhaafay. Tani waa waxa ka soo baxa a Daraasada IFOP waxaa la sameeyay 2015 mawduucan. Markaa waxaa jirta fursad wanaagsan oo dhibaatadaa kuu saameyn doonta. Waxaad haysataa seddex sano inaad ku dalbato lacagtaada. Xaaladaha cilladdu ka jirto qoritaanka jeegaaga waxay dhalisay in lacag bixin la bixin waayo.
Hubi jeegaaga oo ka bilow khaladaadka ugu badan
Waa kuwan khaladaad qaarkood oo laga yaabo inaad ku aragto boggaaga lacagta. Mid kasta oo qaladaadkiisa ka mid ahi waxay keenaan dhicitaan. Khasaare lacageed oo mararka qaarkooda wax weyn ku tari kara. Haddii da'daada aan xisaabta lagu darsan 10 sano. Waxaan kuu ogolaanayaa inaad qiyaasito inta lacag ee luntay. Maaha in la xuso goorta la gaadhayo, xisaabinta hawlgabkaaga. Kaasoo lagu salayn doono lacag bixinno qaali ah. Shirkadaha qaarkood xitaa ixtiraamaan heshiisyada wadajirka ah ee la xoojinayo.
Tusaalooyinka qaarkood dhaqan xumo baahsan
Lambar saacadaha dheeraadka ah oo aan sax aheyn
Xisaabinta khaldan ee tirada maalmaha fasaxa
Goynta isugeynta tabarucaada
Da'daada lama xisaabin doono xisaabinta mushaarkaaga
Ha iloowin in dib loogu celiyo warbixinnada kharashyada
Wadajirka heshiiska lama adeegsan doono
Maqnaanshaha fasaxa jirada ee aan la sheegin
READ Gaadiidka Faransiiska
Liiska qodobbada si gaar ah looga fiirsan doono
1) Warbixin guud
Magaca iyo cinwaanka loo shaqeeyahaaga
NAF ama koodhka APE
Magacaabista jirka ee aruurisa tabarucaada bulshada ee loo shaqeeyahaaga iyo lambarka lacagtiisa la bixiyo
Heshiiska wadareed ee la adeegsan karo ama xusuusinta qodobbada xeerka shaqada, ee ku saabsan muddada fasaxa mushaharka iyo muddada ogeysiiska muddadda la joojiyay heshiiska shaqada
Joogitaanka ogeysiiska fasaxa lacag bixinta, RTT, nasashada habeenkii ee magdhawga ...
Sharaxaadu waxay kugu dhiirigalinaysaa inaad xajisid lacagtaada si aan xad lahayn
2) Waxyaabaha loo xisaabiyo mushaarkaaga
Magacaaga iyo booska aad haysato
Mowqifka laga gaadhey jarandarooyinka marka loo eego soosaarka caadiga (M1, M2, OS5)
Tirada mushaharkaaga guud
Taariikhda iyo tirada saacadaha la shaqeeyey ee ay Mushaharkani la xidhiidho
Farqiga u dhexeeya saacadaha lagu bixiyo heerka caadiga ah iyo kuwa kordhay iyada oo la sheegayo sicirka lagu dalbaday koox kasta (saacadaha habeenka, saacadaha dheeraadka ah, axadda, ciidaha dadweynaha)
Nooca iyo xaddiga lacageed ee kaabista mushaharka guud (Raadi waxa aad xaq u leedahay)
Cadadka gunnada gaadiidka
Nooca iyo qadarka dheeraadka ah ee mushaharka ee ku xiran tabaruca shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha
Nooca iyo cadadka tabarucaada bulshada
Nooca iyo qadarka dhammaan lacagaha laga jaro lacagtaada (taxadir gaar ahaan haddii aad ku jirtid fasaxa jirrada ama aad shil ku gashay shaqada)
Taariikhaha ciidahaaga iyo qadarka magdhowga inta lagu jiro muddadan
Caddadka iyo xaddiga cashuurta lagaa xaraysanayo ee adiga kugu saabsan iyo macluumaadka qaddarka kugu waajibay ka hor iyo ka bixitaanka ka dib
Tirada run ahaantii uu helo shaqaaluhu markii la xisaabiyo kadib
READ Sharciyada la xiriira darawalnimada iyo baabuur wadidda ee Faransiiska
Macluumaadka waa inaan sinaba loogu muuqan jeegaaga lacagta
Waa sharci darro in lagu siiyo warqad lacag bixin ah oo muujineysa ka qeyb qaadashadaada shaqo joojinta. Uumana tixraaci karno waajibaadka ururkaaga. Iyo guud ahaan wixii macluumaad ah ee ku xadgudbaya xuquuqda shaqsiyaadka iyo xorriyadda shaqsiyeed ama mid guud.
Baro sida loo hubiyo khadkaaga lacagta Agoosto 18th, 2020Tranquillus
horeDib ula wareego ogeysiis la'aan, xuquuqda haweenka uurka leh
socdaKoontada tababarka shaqsiga: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato